मार्केटिंग एनालिटिक्स १०१: मलाई पैसा देखाउनुहोस्! | Martech Zone
मार्केटिंग एनालिटिक्स १०१: मलाई पैसा देखाउनुहोस्!
मंगलवार, सेप्टेम्बर 30, 2008 मंगलवार, फेब्रुअरी 16, 2016 Douglas Karr
जब मैले गत महिना प्रतिभा चिडियाखानाको लागि लेख लेखें, मैले यस बारेमा लेखें स्वचालन र एकीकरणको लाभ उठाउँदै तपाईंको अनलाइन रणनीतिहरूलाई अधिकतम बनाउन र लाभ उठाउनका साथै कम्पनीहरूले ती कार्यन्वयन गर्न व्यवसायलाई मद्दत गर्दछ विपणन स्वचालन अवसरहरू.
केहि मिनेट अघि, मलाई एन्ड्र्यू जेनिसबाट एक ईमेल पठाइएको थियो इभान्टेज परामर्श नयाँ ह्वाइटपेपरमा उनीहरूले रिलिज गरेका छन् र नतीजा अत्यन्तै रोचक छन्। (तलको सारांश केहि एन्ड्र्यूले पठाएको ईमेलमा लेखेका थिए… म यो शब्द पनि भन्न सक्दिन!)
मार्केटिंग एनालिटिक्सको राज्य
यस ह्वाइटपेपरले ईभानटेज कन्सल्टिंग द्वारा गरिएको सर्वेक्षणको नतिजाको सार दिन्छ विश्लेषण मार्केटि teams टोली र समग्रमा संगठनहरूमा।
पेपरले रिपोर्ट गर्दछ कि जब कम्पनीहरूले बढी समय र संसाधनहरू खर्च गरिरहेका छन् विश्लेषण, अधिक अझै डाटालाई कार्यमा रूपान्तरण गर्ने चुनौतीको सामना गर्दछ। यद्यपि सर्वेक्षण जुम्ल्याहा शहरहरूमा लक्षित थियो, तर म विश्वास गर्दछु परिणामहरू सम्पूर्ण उद्योगमा संगत हुनेछ।
धेरै बजारहरू हुन् अधिक लगानी विश्लेषण र संसाधनहरू, तर डाटा चालित मार्केटिंग को लागी बदल्न को लागी अधिकांश संगठनहरु मा वास्तविकता छैन।
मार्केटिंग डलर तर्फ लाग्न थालेको छ अधिक मापन मिडिया.
त्यहाँ शीर्ष प्रदर्शनकर्ताहरूको समूह छ जसले लिएका छन् डाटा चालित मार्केटिंग मुटुमा
व्यवस्थापन कुञ्जी हो डाटा चालित मार्केटिंगमा संक्रमण गर्न, र बोर्डमा जानको लागि ढिलो छ।
संक्षेप मा, यो मार्केटिंग को एक आशावादी दृष्टिकोण हो ... कम्पनीहरूले वास्तवमै टेक्नोलोजीको लाभ उठाउन, परिणामहरू नाप्न, र तदनुसार समायोजन गर्न थालेका छन्। तिनीहरू सुरु गर्दैछन् यो प्राप्त गर्नुहोस्! मास मार्केटि। मरेका छन, वेबमा लक्षित मार्केटिंगको उदय अन्तमा गति प्राप्त गर्दैछ।
मलाई पैसा देखाउनुहोस्!
प्रत्यक्ष र डाटाबेस मार्केटरहरूले वर्षौंदेखि यो चिच्याइरहेका छन् ... यसले मलाई जेरी म्याकगुइरमा क्युवा गुडिingको सम्झना गराउँदछ कि त्यसले उसलाई चिच्यायो, "मलाई पैसा देखाउनुहोस्!"। प्रत्येक कम्पनीका अध्यक्षहरू उनीहरूको मार्केटि department डिपार्टमेन्टमा उस्तै चिच्याउनु पर्छ।
यो उपभोक्ताका साथै बजारहरूका लागि राम्रो समाचार हो। जब उपभोक्ताहरू विज्ञापनमा पर्दछन् जुन लक्षित र वास्तविक मूल्यवान छ, तिनीहरूले प्रतिक्रिया दिन्छन्। जब मार्केटरहरूले सही काम गर्छन्, तिनीहरूले पहिचान गर्दछन् कि प्रयासको भुक्तानी हुन्छ। यदि तपाईं सेट गरिरहनु भएको छैन भने रूपान्तरण लक्ष्यहरू, परिणामहरूको अनुगमन र समायोजनहरू गर्दा, तपाईं केवल अँध्यारोमा डार्टहरू फाल्दै हुनुहुन्छ।
तपाईं ईभान्टेजबाट मार्केटिंग एनालिटिक्समा ह्वाइटपेपर डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। कम्पनीको वेब साइटबाट: 1999 भएकोले इभान्टेज परामर्श ई मार्केटिंग, अपरेशन र आईटी कम्पोनेन्टहरू मिलाएर ई-व्यवसायलाई सफल हुन मद्दत गरेको छ? अधिकतम क्षमता र प्रभावकारिता को लागी।
टैग: पैसाको रंगसुविधाevantage परामर्शमलाई पैसा देखाऊसेताे कागजWhitepaper
के तपाईंले ब्लगहरू बीज गर्नुभयो?
म एक ठूलो काम छोड्दै छु र सोशल मीडियाको लागि हेडिing
म सहमत छु कि सबै कुरा अधिक र अधिक लक्षित हुँदैछ। जब म मेरो आफ्नै व्यवसाय सुरु गर्दैछु र विज्ञापन विकल्पहरू खोज्दैछु, म आफैंलाई निरन्तर डेटा निगरानी गरिरहेको छु। कुन विज्ञापनहरूले क्लिकहरू पाउँछन् कुनले गर्दैनन्। त्यसोभए किन पत्ता लगाउने प्रयास गर्नुहोस् र क्लिक नगर्नेहरूलाई बदल्नुहोस् जुन मलाई लाग्छ कि क्लिक हुनेछ।
यो सबै तपाईंको लक्षित बजार को हो र तिनीहरू वास्तवमा के हेर्न चाहन्छन् भन्ने वरपर आधारित छ। सामान्यतया मानिसहरूले विज्ञापनलाई घृणा गर्छन् तर मलाई लाग्छ कि तिनीहरू यति लामो समयदेखि लक्षित नगरिएका विज्ञापनहरूले बमबारी गरिएका छन्। यदि तपाईंले तिनीहरूको अगाडि सामानहरू राख्नुभयो भने तिनीहरूले उपयोगी पाउन सक्छन् तिनीहरूले तपाईंको विज्ञापनहरू तपाईंको साइटमा उपलब्ध सामग्रीमा थपेको रूपमा देख्नेछन्।